Afaka bevohoka ve aho amin'ny polype iray ao amin'ny tranonjaza?
Ity fiorenana ity, toy ny polype, dia fivoahana (paikady) izay mivantana mivantana avy amin'ny rindrin'ny tranonjaza ao anatin'ny tonony. Amin'ny habeny lehibe, dia afaka mameno tanteraka ny taova rehetra izy, ary mety hahatratra ny vagina aza. Izany no mahatonga ireo vehivavy mijaly amin'io karazana aretina io matetika dia manontany tena raha mety ho bevohoka amin'ny polyp iray amin'ny tranonjaza. Andao hiezahantsika hahatakatra izany toe-javatra izany ary hamaly izany.
Polyps amin'ny tranon-jaza sy ny fitondrana vohoka dia hevitra tsy mifanentana?
Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia toy izao izany. Ny zavatra dia ny polyposis (ny korontana izay ahitan'ny ankamaroan'ny fitomboan'ny taolam-paty ao an-tampon-taolam-paty atsy ho atsy) dia manelingelina ny tavy endometrial. Vokatr'izany dia tena matevina izy io, izay mivantana sy manelingelina ny fambolena, izay tsy misy ny fitondrana vohoka tsy azo atao.
Na izany aza, ho an'ny rariny, dia tokony ho marihina fa matetika no mitranga ny polype ao amin'ny tranonjaza mandritra ny fitondrana vohoka. Amin'ny toe-javatra toy izany dia ny fiovana amin'ny hormona ny dingana fanentanana ho an'ny fanabeazana azy, izay tsy azo ihodivirana aorian'ny fampiraisana. Amin'ny ankapobeny dia tsy misy fihetsiketsehana mihatra amin'ny dokotera voamarika: ny mpitsabo dia manara-maso tsara ny halehiben'ny fitomboan'ny zaza sy ny toetran'ny vehivavy bevohoka.
Ny singa manokana, angamba, ny fitenin'ny polyp ao amin'ny lakandrano. Raha jerena ny mety hitranga amin'ny fitrangan'ny areti-mifindra, matetika dia nesorina izany, ary nahitana fotoana fohy.
Inona no mety ho vohoka amin'ny polyp?
Mamaly ny fanontaniana momba ny vehivavy raha mety amin'ny fanondranana zaza tsy ampy taona amin'ny tranon-jaza ny dokotera, milaza ny dokotera fa kely loatra ny vintana. Na izany aza, tsy manaisotra izany ny zava-misy. Ny zava-drehetra dia miankina amin'ny halehiben'ny fahasimbana eo amin'ny sehatry ny tranonjaza, ny isa sy ny haben'ny polypos.
Araka izany, araka ny hita amin'ny lahatsoratra, misy polyp amin'ny tranonjaza, ary koa amin'ny aretina polycystic, dia mety ho bevohoka. Saingy mendrika ny mandinika ny zava-misy fa ny fiatrehana ny fiterahana amin'ny tranga toy izany, dia mitombo indraindray ny mety hitera-doza amin'ny fitondrana vohoka.
Folio rehefa manomana vohoka
ICSI sy ECO - inona ny fahasamihafana?
Inona no atao hoe asidra folakin'ny fandrindrana vohoka?
Ahoana ny fisafidianana lamba rongony?
Fomba ahoana no hisafidianana jiro ho an'ny ririnina?
Nahoana ny tovovavy iray no manonofy soavaly?
Ahoana no fomba hanasaziana mpanao heloka bevava amin'ny alàlan'ny fitongilanana lavitra?
Salady misy karana sy anana
Massage miaraka amin'ny colic
Dresses amin'ny gorodona 2016
Moa ve vovoka mampidi-doza ho an'ny ankizilahy?
Ny fanaovana diavina amin'ny fiverenan'ny malalany